Weerar Bulxan iyo Cali Oday
Insaanku kolkii uu muddo barwaaqo iyo badhaadhe ku jiro sanahaabo iyo kibir ayuu billaabaa. Dawladdo iyo talisyo fac weyn oo xoog istaawiyey dabadeed khilaaf ka dhashay islaweyni iyo muruq-tuujin uu jilbaha dhulka ugu dhuftay ayaa ku badan waayaha caalamka.
Sida taariikhdu nagu soo gaadhay, waxaa jirtay boqortooyo muddo dheer u arimin jirtay tol weynaha Soomaaliyeed ee Kuumade: Absame iyo Galimays. Boqortooyadaasi is badbedel badan ayey soo martay. Hoggaankeeda guud mar waxaa hayey Bartire, marna waxaa hayey Reer Sacad, markii dambena waxaa caynaanka u qabtay Bah Xawaadle, illaa ay ugu dambayntii filiqday una kala hadaftay saldanado yaryar.
Kalajab kasta oo boqortooyadaa ku dhaca wuxuu sababi jiray murug badan, muruggaasina wuxuu keeni jiray in tololka boqortooyadaa hoos yimaada ay u qaybsamaan in boqorkii hore taageersan iyo in midkan ka faladhmay ayidsan. Sidaasi markay dhaco ayuu waayo-aragu ku talin jiray in wadajirka la ilaaliyo, tolkuna aanu kala ufoonin maxaa yeelay “kala lun kala lulashaa dhaanta” Taladaa fiican ee waayeelku soo jeediyey dhawr goor oo aan lamahadinin ayaa laga booday. “Waayo-arag hadduu talin lahaa, yaa wax fudud mooday?”
Haddaba, xilli ka mid ah xilliggii Bah Xawaadle hormuudka boqortooyadaa ahayd ayaa waxaa la yidhi Abraahiin baa tashaday kuna heshiiyey inay dhisaan ama samaystaan suldaan iyaga gaar u ah. Nin Cabdiraxmaan la odhan jiray ayey boqreen. Xaruntii boqortooyada arintaa lagama jeclaysan. Haddaba si khilaaf loogu dhextuuro loogana hortago suldaanka cusub ee Abriihiin doortay, waxay odayaashii boqortooyada bud-dhigaha u ahaa isku dayeen inay mid kale ka garab sharaxaan. Waxay istuseen inuu ismaandhaaf dhici doono haddii ay Abraahiin kasoo baxaan labo suldaan oo garbo-siman ah, dabadeedna ay halkaa ku kala dhaqaaqi doonaan.
Ninbay caano ku shubeen, gabadh u dhiseen, xoolona siiyeen. Waxay ku yidhaahdeen suldaanimada Abraahiin adaa mudan ee kacoo tolkaa isku duborido, cudud iyo ciiddana waad naga heli. Ninkaasi arintaa wuu la dhacay, isagoo fikirkaa qaba ayuuna carro Abraahiin u ambabaxay. Oday waayo-arag ah ayaa tabtaa ay Bah Xawaadle isticmaashay ka gowsqabsaday kuna dooday inaan arintaasi labadaa nin wax khilaaf ah ku dhalinaynin, ayna isu tanaasuli doonaan. Sidii odaygaasi ka digay, tabcadaasi ma shaqaynin oo ninkii loo dhisay, maalkana lagu bixiyey ayuu Abraahiin mood yidhi. Dabeed, khilaafkii ay Bah Xawaadle ku waday inuu Abraahiin dhexdii ka curto wuxuu isu rogay mid iyaga iyo Abraahiin oo wadajira dhexmara.
Halkaa mushkilo ayaa mudh kasoo tidhi, labadaa reerna waxaa dhexmaray dagaal ahli ah. Waxaa haddaba fidnadaa gabayo ka tiriyey laba nin oo gabay loo qiray. Waa Weerar Bulxan iyo Cali Oday.
Weerar ayaa ku horreeyey oo mariyey gabay digniin, faan iyo goodi wada socda ah. Wuxuu ku faanay laandheeronimo, hub casri ah iyo degaan ballaadhan oo haddii dhinac colaadi ka dhacdo dhinacyo kale oo uu u ciirsado leh. Cali Oday tolkiina tiro yaraan iyo inay dhul kooban ku dhaqan yihiin sidaa awgeed aanay xamili karin colaad degaankaa ka dillaacda ayey ugu muuqatay. Wuxuu ku xidhay in illaa Aadan iyo Xaawo tallada Baahale iyaga uun ay ka go’i jirtay. Wuxuu yidhi:
Indhaawayd waa taan beneyday, baanisaha gabaye
Waataan ka baaliday tan iyo, bilo samoolaade
Bilcil waaban baan jiifi jiray, sida bakaylaade
Alleylehe bardoodan iyo gabay, iguma beegnayne
Baab waxaan u naqay Reer Xirsiga, bawda damin waayey
Baab kalena waa Ina Barwaaq, hal aan u beeyooday
Laba iyo toban hal oo wada ba’ ah, igaga buus qaado
Banka Faaf biyaha geel u dhaco, hilada baarjeexan
Bilcanta iyo barbaartiyo habraha, bidixda saydhaaya
Burburka iyo barwaaqada la cuni, badowga dhaydiisa
Iyo balaayo reeraha tas odhan, igaga buus qaado
Biyo-keenta Reer Faaraxee, baanka wada haysta
Boon iyo Warfaa iyo Xirsiga, Bih-ina-nuur oo dhan
Anigaa bukaartaba ka rogi, beesha Magan Guura
Bah Xawaadle kaliyey u dhigmiyee, igaga buus qaado
Bishaan Reer Magan waxaa u iman, boqol darmaanoode
Buuryada nin jaray oon lahayn, faras baroor ciida
Beeshaanu nahay laguma oga, nimaan baxdow hayne
Baadida lug kuma doonanee, igaga buusqaado
Boqol wali biyaha Aw Caliyoo, buuniyaal wada ah
Iyagoon bidhaantaada arag, budana ka yeeli
Balo aadan ogayn baa jirtee, igaga buus qaado
Berri hoose Boodhiyo Gidhays, Baato iyo Ceel Cad
Balli iyo Bur Geesoole iyo, Bohola Faafkooda
Bilcilliyo lafaha buuran iyo, Baarara agtiisa
Buqda Magan barkadahaan ku furay, Doollo beledkeeda
Intaasuu ku baahoo tolkay, buuxiyoo degaye
Adiguna barqaad fuli haddaad, beri aroortaaye
Faro baalis iilama ekide, igaga buus qaado
Dalka Eebbahaa igu basharay, tan iyo Boosaaso
Barbarkaan u boodaba arlada aanan, ka baydhaynin
Iyo bohosha aadan dhaafi karin, igaga buus qaado
Nin bah yari ma dego meel haddaan, lagu bariinayne
Bah Gasaalaada ku meersan iyo, baraha Reer Kooshin
Cabdillahan ka badan kuwaas, dhabarka kaa boobi
Meeshaad kusoo baqan jirteen, Ban iyo Ood Weyne
Berri inaan Burciyo Loy ku furi, igaga buusqaado
Nin baruur leh oo haad balxaday, waa bugtiyo ceebe
Dumar bilicle oo bacad ku yaal, kuma baxdootaane
Yaan baqalyo idin dhuunyanine, igaga buus qaado
Barnida tiirsan labadiina beyd, aqalladoo buuxa
Billadayaha iyo dhiisha iyo, bulayda reexaanta
Intaan baylah duul kale u helin, igaga buus qaado
Baashiga magaalada fadhiya, ee Berbera yaala
Isagaba naftaa loo baqee, lama bariiyeene
Wakaas billaawiyo warmiyo, buuray qalabkiiye
Hadday bilise shay habkaan, laga bukaareene
Anna baalad kaaga adkiyee, igaga buus qaado
Buntukhooley baanu nahay rasaas, baabah kaa dhigiye
Bir ma sidano oo qalabku waa, nin iyo baaruude
Banaadiikh dablaan kugu haligi, igaga buusqaado
Bis ma galo nin habartii ahayd, baal caddii hore e
Waxaan beegsanaa naaga go’ba, dhalasho buure??
Birtu waliba sii kala dhaddige, igaga buus qaado
Burka xabaga maatidu dhirbay, baadhataa sabene
Anna waxa bil Alla dhashaba, ii bislaan jiraye
Afartii billood baa rag kale, baydi maashadaye
Bal ogaadaa biirtaan tufiyo, biixidaan jebiyo
Barkinkiyo barkimo qoortu wow, kala buseeshaaye
Bal ogaadaa biixuu noqdaa, baalal dheeruhuye
Haddii boqor nin lahaan jiray nin kale, beri u toogowdo
Bal ogaada baadiyo ninkeed, wow bidhaan arage
Meeshiyo billowgii halkiyo, beydkii Nabi Aadan
Baahilo Siciid boqorkanaga, yaw bud dhig ahaaye
Ma nagu beegsadaan labo iyo toban, nimaan bur loo saarin
Waxaa gabaygaa ka jawaabay Cali Oday. Cali wuxuu tiriyey gabay ebhin, araare iyo waano isugu jira, wuxuuna ka digay cidhib-xumada ka dhalan karta dagaal labadaa qoys dhexmara. Tiro yaraani inaanay haynin oo uu ku arooro Sacad Amuudaan, tol weyne ay wada dhasheen isna jecel yihiin inuu ciiddaa yahay ayuu isna ku dhaatay. Wuxuu ku xidhay, haddii aad waanadayda dhag u jalaqsiin waydo, is keen sii wixii aad ka hesho ayaad leedahaye. Wuxuu yidhi Cali Oday:
Ogoobow Bah Xawaadle way, adur dhabaysaaye
Sidii Eebe aadmiga ayey, amar u sheegteene
Inaad ii ugaas tahay anoon, ku arin diidaynin
Allahiin hadduu Alle yahay, aayar naga jooga
Sidii awr gugulo waayey baad, ii adaafiifine
Waxaad iga eryeysana ma oga, aan ajaal ahayne
Haddaad ul iyo qool ila dhacdood, eriso ruuxayga
Kol unbaan intaan oo idhaah, eebo soo ridane
Haddaad inana doontaan midaad, eegataan rariye
Agliil iyo waxaan kuugu dari, awro goolalehe
Idil caanaheed waxaa, aqalka kuu yaala
Iqliil gaban ah oo igu yarbaan, ubadka siistaaye
Abtirsiinyaday waxay gashaa, Sacad Amuudaane
Alfayn boqol ka badan wiilashuu, dhalay adeerkaye
Ilma adeer is jecel baanu nahay, anniyo Fooley e
Haddaan awrta Gacan Weyne lumin, waan aleegadiye
Allaa igu ogoo inaan qabin, faro aqliilkoode
Abbuu Jahal sidiisii haddaad, Eebbe garan waydo
Arinkii Namruud eeday baan, kugu arkaayaaye
Sabiyo nabaa laga helaa, abu jihaadkiiye
Haddii kale na soo aada oo, kaalay naga iisha
Waa lays dilay, kolkaasuu Cali Oday gabaygii ku noqday oo uu tiriyey mid hor leh oo digasho ah. Gabaygaa waxaa naga soo gaadhay:
Garasho iyo Bah Dhuubaan lahayn, gocosho waayeele
Waana garab baannan yahay ninkii, gacal u haystaaye
Gashigayga adigoo qaboo, gelaya dhiigayga
Asaan diiday beesho go’diyo, geeri sii badata
Waxaad nagu galaysaan kolkuu, ruuxna garan waayey
Adoo goba anoo guna idaa, ma isla soo gaadhnay
Wuxuu gebi ku dumayaad tahee, mayla garan wayday
Geeridii Sanqoole Hurriyo, gabadhii Nuur Ciise
Iyo tii Garlawgubay dhacdiyo, hadalkii Geedlaawe
Dafar siduu u gaardiyey ama siduu, tol ugu goohaayey
Iyo gocashadii Faarax Gaydh, dhaarta kaga gooyey
Galabtaa dabeed wixii ka dhacay, waad ku gubateene
Goobtaan islaynoo dhan waad, gebawaraydeene
Waxaa guna adoo lagu gambiyey, oo anaa gobahe
Ma haddaad gadhka i jiiddayood, nabad usoo guuxday
F.G. Inkasta oo ay muuqato inay gabayadani isku qiso iyo wakhtiba yihiin, haddana ma sixi karo inay sidaa isugu xigeen. Haddaba haddii aad gabayada iyo sheekadaba u hayso si ka duwan sida aan usoo gudbinay, fadlan nala soo xidhiidh. Sidaa oo kale meerisyada qaarkood ma saxna ee soo sax. mail@doollo.com